Ebe Iji Chọta Europe Kasị Ebube Architecture | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > Ebe Iji Chọta Europe Kasị Ebube Architecture
Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Njem Europe
Na-achọ ịhụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ikenyeneke mbiet ije na gị ọzọ ezumike? Ọ bụrụ otú ahụ, e eleghị anya ọ dịghị ebe ka mma karịa Europe maka ị. Ma ị na-nwere mmasi na oge gboo ije ekwekọghị ma ọ bụ na-enwe olileanya na chọta ụfọdụ na-amachaghị ama jewels, European obodo gị kpuchie. Ka anyị nwere a lee anya na ihe atụ ụfọdụ nke ebube ije na ebe ịhụ ya niile:
ebube Architecture: Ịtali
Ịtali jupụtara obodo obere obodo ebe i nwere ike-efu edebe mara mma ụlọ. Ma ị na-na Rome ma ọ bụ Florence, fọrọ nke nta n'akụkụ ọ bụla bụ uru a picture. Maka njem nleta na-achọ ọmarịcha obere obodo, Vicenza bụ aka nri. Ọ bụ nso ma ọ bụrụ na ị na-na na na-ewere a ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ site Venice, bụ nke na-uru a nleta. Mgbe Vincenza na-ama n'ihi na ya Renaissance ije style ime uche nke Andrea Palladio, Venetian ije bụ mgbe Gothic, kọwara n'uju, na mma.
Tinyere ihe ndị ọzọ Italian obodo i nwere ike na-atụ uche, Rome na Florence nwekwara iguzo dị ka ọkacha mmasị. Rome bụ tumadi full of akara onye ọ bụla ga-ahụ otu ugboro na ndụ ha na ha. The Colosseum, St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti, arụsị, na na isi iyi Trevi ha niile kwesịrị nleta. N'akụkụ aka nke ọzọ, Florence nwere a ngwakọta nke ụdị dị iche iche, ọtụtụ Ichi oge ochie ndị Gris na Rom ije, Gothic na Renaissance.
ebube Architecture: France
France bụ home ka a ole na ole obodo na a dịgasị iche iche nke ekwekọghị nke ga-ahapụ ọ bụla Ebube Architecture n'anya nkwusi nku ume. Otu n'ime ihe ndị bụ isi na-aga ime a nleta, Strasbourg, Bordeaux, na Paris kwesiri inye ndị kasị.
E nwere ihe a ọtụtụ na-ahụ ma ime na Strasbourg, tinyere ịrịba ihe atụ nke Gothic ije, njikọ chiri anya na oge a na postmodern distrikti na Alsatian ije. Bordeaux bụkwa pụrụ iche. The kasị ibu obodo na Aquitaine region obụrede mbụre a fabulous narị afọ nke 18 mepere emepe na mpaghara, Obí nke Bourse, na Cathedral Saint Andre. N'ikpeazụ, Paris bụ ma ama dị ka otu n'ime birthplaces nke Gothic ije, ma ọ bụ na-ọgaranya iche iche ihe atụ nke Belle Epoque na Art ọhụrụ.
E nwere ọtụtụ ụkpụrụ ụlọ bara nnukwu uru na ike dị na Germany. Otú ọ dị, abụọ nke kasị adọrọ mmasị ndị na- Berlin na Rothenburg. Architecture-emekarị na-aga aka na aka na akụkọ ihe mere eme, na ị pụrụ ịhụ nke a n'ụzọ doro anya na Berlin. The obodo e kewara ozugbo, na nke ahụ bụ doro anya na anya n'ebe ụfọdụ. Na-eme ka ọ a akwa ebe na- ahụmahụ dị iche iche, ndị nke ije na amaba miri n'ime ndị mere eme mmetụta nke art.
N'akụkụ aka nke ọzọ, Rothenburg bụ ebe na-achọ ka ọ bịara kpọmkwem nke a akụkọ-akụkọ. Nke a na-ero ụra, ochie-na-achọ obodo bụ a njem nleta ọkacha mmasị. Ọ bụ a praịm atụ nke mara European ochie ije na ya obodo mgbidi na gabled n'elu ụlọ.
Stuttgart na Rothenburg Ụgbọ oloko
Nuremberg na Rothenburg Ụgbọ oloko
Europe bụ uru na-eme njem site na, na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ mara mma ebe na i kwesịrị ịgbalịsi ike ileta. Ebube ije dị ukwuu England, Belgium, Austria, Sweden, na Netherlands dị ka nke ọma.
Ọ bụrụ na ị dị njikere akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè maka ije anya-ịhụ njem nke gị na nrọ, anya gị ebe na Zọpụta a Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Architecture	njem France	njem njem	njem nlegharị anya
Ụgbọ okporo ígwè njem Scotland, Njem Europe